कैलालीमा हावाहुरीको वितन्डा, गाडी नै उडायो, २१ घाइते – Jaljala Online
कैलालीमा हावाहुरीको वितन्डा, गाडी नै उडायो, २१ घाइते
Posted on June 6, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ २३, धनगढी । पश्चिम तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा आएको हावाहुरीका कारण ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ ।
स्थानीय घाइते हुनुका साथै केही सवारी साधन समेत हावाले उडाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार सेती अञ्चल अस्पतालमा हावाहुरीका कारण ११ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
धनगढीसँगै जोडिएको डोकेबजारमा हावाहुरीले उडाएको ग २ प ८७२० नम्बरको पिकअप महिन्द्रा जीपका चालक र सहचालक दुबैजना घाइते छन् । कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले दुबैजनाको उद्धार गरी सेती अञ्चल अस्पताल पुर्याएको छ ।
कञ्चनपुर प्रहरीले सातजना भन्दा बढी घाइते महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पुगेको जनाएको छ । हावाहुरीले कैलाली र कञ्चनपुरका सैयौं घरका छाना उडाएको छ भने पक्की घरको जीना (छतमा जाने बाटो)को जस्ताहरु उडाएको छ ।
स्थानीयहरु पूर्वी तराईको बाराको जस्तै हावाहुरी आएको बताउँछन् । कैलाली, कञ्चनपुरमा बिहीबार बेलुकी ८ बजेदेखि झण्डै ४० मिनेट जति आएको भयानक हावाहुरी अहिलेसम्मकै ठूलो भएको स्थानीयहरुको दावी छ ।
धनगढीका होटल सुनगाभाका सञ्चालक सुदीप क्षेत्रीको पनि हावाहुरीेले घरको छाना उडाएको छ भने उनको दुईलाख लागानीको सटरिङ उडाएको छ । श्रेष्ठले शुक्रबार छत हाल्ने तयारी गरेका थिए ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा दर्जनौं विद्युतका पोलहरु ढलाएकाले विद्युत् आपुर्ती बन्द भएको छ भने नेपाल टेलिकमका पोलहरुमा पनि क्षति पुगेपछि केही स्थानको फोन सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ ।
कैलाली प्रहरीेले मानिसहरु रुख ढलेर च्यापिएको खबर आए पनि त्यहाँ जाने सडकमा दर्जनौं रुखहरु ढलेकाले जान नसकेको जनाएको छ ।
‘हामीलाई धेरै ठाउँबाट रुखहरु ढलेर मानिसहरु च्यपिएको खबर आइरहेको छ, तर जान खोज्दा बाटो अवरुद्ध छ’ कैलालीका एसपी सुदीप गिरिले भने ।
उनले कैलालीभरका सबै प्रहरीलाई मानवीय उद्धारमा खटाएको बताए । ‘म आफैँ पनि फील्डमा छु, सबै प्रहरीलाई उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको छु’ एसपी गिरिले भने । कैलाली र कञ्चनपुरमा अहिलसम्मकै ठूलो बेगको हावाहुरी आएको अनुमान गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
‘आमा ! बुवालाई पनि गयो भनिदिनू है’ भन्दै परदेश पसेका छोरा कहिलै फर्केनन्
Posted on September 7, 2019 Author Jaljala Online
सुवास पण्डित/भदौ२१, काठमाडौं । हुर्किँदै गरेको अशोकाका विरुवाहरुले छेकिएको अधुरो घर । घरको अगाडिपट्टि बालुवा चाल्न ठिक्क पारिएको तारजाली छ । शुक्रबार विहानको कलिलो घाममा त्यही घरको पिँढीको डिलमा सुस्ताइरहेकी आमा छिन् । घरभित्र टाउकोमा सेतो कपडा बेरेर पति वियोगमा छट्पटाइरहेकी लक्ष्मी । अनि निन्याउरो मुख लगाएर कुनातिर उभिरहेका दुई छोरा । अफगानिस्तानको कावुल सोमबार […]
Posted on August 12, 2019 Author Jaljala Online
साउन २७, वाशिंटन डीसी । अमेरिकाले नेपालीहरुलाई समेत प्रभावित बनाउने गरी नयाँ आप्रवासन नियम ल्याएको छ । नयाँ नियमअनुसार अमेरिका जान चाहने नेपालीहरुले यसअघि लागू भएभन्दा अधिक आयस्रोत देखाउनु पर्नेछ । नयाँ आप्रवासन नियम अनुसार अमेरिकामा वैध रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीले कुनै सामाजिक कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेको भए उनीहरु अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य […]
रोल्पामा प्रेम विवाह गरेको चार महिनामै श्रीमान्ले अर्की लिएर भागेपछि……..
जेठ ६, रोल्पा । “दुई वर्षसम्म फोनबाट माया पिरती गाँसियो, जात भात पनि मिल्ने समाजले राम्रै ठान्ला भनेर वैवाहिक जीवनमा बाँधियो, मनले मन पराएर विवाह गरियो अहिले आएर धोका होला भन्ने के थाहा”, रोल्पा नगरपालिका–१ कालापानीकी गङ्गा कवरले रुँदै भन्नुभयो । सोही नगरपालिका–२ निवासी हुकुम कवर सँग २०७५ साल असारमा प्रेम विवाह गरेकी कवरले जीवनमा […]
किन चल्यो प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ ? यस्तो छ भित्री नालीबेली [भिडियोसहित]
आफैंलाई हेरेर, छोएर यौन आनन्द लिने युवतीको कहानी [नालीबेलीसहित]